Naiwei Robot wuxuu kaqeybgalayaa Carwada Iftiiminta ee Guzhen, Zhongshan
Naiwei Robot Technology Co., Ltd. waxaa la aasaasay Febraayo 18, 2020. Ka horreeyay waa Naiwei (Dongguan) Robot Technology Co., Ltd., oo ay ka shaqeeyaan in kabadan 600 oo shaqaale ah, 5 warshadood oo laan ah, iyo guud ahaan aagga dhirta oo dhan 20,000 mitir laba jibbaaran Shirkaddu waxay leedahay koox R & D oo leh khibrad wax ku ool ah ...
Robotics-ka Dunida cusub ee loo yaqaan '2020 Robotics'
Warbixinta cusub ee Robotics-ka adduunka ee loo yaqaan 'Warshadaha Robotka' 2020 waxay muujineysaa rikoor gaaraya 2.7 milyan oo aalado aalado ah oo ka shaqeeya warshadaha adduunka oo dhan - koror 12% ah. Iibinta aalado cusub ayaa weli ku jira heer sare iyadoo 373,000 oo unug laga soo diray adduunka oo dhan sanadka 2019. Tani waa 12% ka yar marka loo eego 2018, laakiin wali t ...
Ogosto 27th, kalandarka dayaxa Shiinaha, waa maalinta ugu kulul xagaaga, oo loogu yeero maalinta DaShu
Ogosto 27th, kalandarka dayaxa Shiinaha, waa maalinta ugu kulul xagaaga, oo loogu yeero maalinta DaShu. Dhamaan shaqaalaheena waxay u shaqeynayaan si aad u adag, si ay u keenaan mashiinka maaskaro ee ASAP. Waxaan rajeyneynaa in miraha ay qabow ku keeni karaan aqoon isweydaarsiga, u keeni karaan qabow qof kasta oo shaqaale ah, oo qof walba xusuusiyo, haddii fe ...
Kalandarka dayaxa ee Shiinaha, 7-da, Luulyo, waa Maalinta Jacaylka Shiinaha, Xafladda QiXi. Naiwei Robot Technology ayaa xaflad jacayl u qabatay si ay ugu dabaal degto.
Ogosto 22-keedii, Teknolojiyada Naiwei Robot waxay qabatay kulan ammaan ah
Bishii Ogosto 22-keedii, Teknolojiyada Naiwei Robot waxay qabatay kulan lagu amaanayo, iyadoo si weyn loogu mahadcelinayo dhammaan dadaalka shaqaalaha iyo tabarucaada horumarka degdegga ah ee shirkadda, isla markaana lagu abaalmariyo RMB300,000 kuwa leh tabarucaad gaar ah ololaha ka dhanka ah COVID-19. Dhegta ...
Si loogu dabbaaldego xafladdii aasaaska 93aad ee Ciidanka Xoreynta Dadka Shiinaha, Teknolojiyada Naiwei Robot waxay kulan la qaadatay halyeey, kaasoo ka fariistay ciidanka
Si loogu dabbaaldego xafladdii aasaaskii 93aad ee Ciidanka Xoreynta Dadka Shiinaha, Teknolojiyada Naiwei Robot waxay kulan la qaadatay halyeey, oo howlgab ka noqday ciidanka, isagoo aad ugu mahadnaqay wixii ay ku soo kordhiyeen shirkad. ...
3-dii Luulyo, xafladda furitaanka Makiinadaha Dongguan Shicheng
by idaacadda Subaxnimo 20-07-03
3-dii Luulyo, xafladda furitaanka Makiinadaha Dongguan Shicheng. shirkad ay iska kaashadeen Shirkada Naiwei Robot Technology iyo Dongguan Hongxiang Makiinado. Waxaan aaminsanahay inay noqon doonto mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan soo saareyaasha mashiinka maaskaro, kuna saleysan iskaashiga guusha ee labada shirkadood. ...
Juun 1-deeda, Teknolojiyada Naiwei Robot waxay abaabushaa shaqaalaha iyo shaqaalaha maamulka si ay u darsaan fadhiga wax soo saarka aaminka ah
Juunyo 1st, Naiwei Robot Technology waxay diyaarinaysaa shaqaalaha iyo shaqaalaha maamulka inay darsaan fadhiga waxsoosaarka aaminka ah, waxay kordhiyaan wacyiga wax soo saarka aaminka ah, iyo inay hagaajiyaan awooda shaqaalaha si ay ula tacaalaan shilalka lama filaanka ah, si loo hubiyo in la gaarsiiyo mashiinka gawaarida xawaaraha sare leh ...
17-ka Maarso, 2020, warshadda Teknolojiyada Naiwei Robot, shaqaaluhu waxay ku mashquulsan yihiin isku soo uruurinta iyo tijaabinta mashiinka sameynta maaskaro.
▲ uruurinta iyo tijaabinta Waxaa lagu soo warramay in, Teknolojiyada Naiwei Robot, ee iyada ka horreysay ay ahayd Naiwei (Dongguan) Robot Technology Co., Ltd, oo inta badan ku howlan cilmi baarista iyo horumarinta ...